माधव समूहको निष्कर्ष : १० बुँदे सहमतिको प्रस्ताव अपूर्ण, ओलीसँग एकता प्रायः असम्भव ! — Imandarmedia.com
माधव समूहको निष्कर्ष : १० बुँदे सहमतिको प्रस्ताव अपूर्ण, ओलीसँग एकता प्रायः असम्भव !
काठमाडौँ। नेकपा एमालेको माधव नेपाल समूहका केन्द्रीय सदस्यहरूले पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीसँग एकताको सम्भावना क्षीण हुँदै गएको निष्कर्ष निकालेका छन्। शुक्रबार बैठकमा धारणा राख्ने अधिकांश केन्द्रीय सदस्यहरूले केपी ओली एकताको पक्षमा नरहेको र झुट मात्र बोलिरहेको निष्कर्ष निकालेका हुन्। काठमाडौँको बुद्धनगरमा बिहीबारदेखि सुरु भएको बैठकमा पहिलो दिन २३ र दोस्रो दिन ३२ जना गरी जम्मा ५५ जनाले पार्टी एकताबारे धारणा राखेका छन्।
केपी ओलीसँग एकता हुन प्रायः सम्भव छैन भन्ने केन्द्रीय सदस्यहरूको धारणा रह्यो। यो सबै केपी ओलीले झुटो बोलिरहेका छन्। उनी एकताको पक्षमा छैनन्। यसको भ्रममा नपरौँ भन्ने एकथरी केन्द्रीय सदस्यहरुको भनाइ थियो, बैठकबारे जानकारी दिँदै नेता जगन्नाथ खतिवडाले भने। खतिवडाका अनुसार सबै केन्द्रीय सदस्यहरूले मूलत: तीन वटा विषयलाई प्राथमिकता दिएका थिए। पहिलो, एकता भए सम्मानजनक र सह अस्तित्वका आधारमा हुनुपर्ने साथै आफ्नो पक्षले पनि जितेको देखिने गरी एकता हुनुपर्ने। दोस्रो, केपी ओलीसँग एकता हुन प्रायः सम्भव छैन। र, तेस्रो कार्यदलले गरेको मिहिनेत अपुरो छ। १० बुँदे सहमतिले आफूहरूको आकाङ्क्षा र एकतालाई विकसित गर्दैन। यसलाई पूर्ण बनाएर समग्रमा सम्झौता गर्नुपर्छ नत्र पुरानै दलदलमा फस्ने मात्र देखिन्छ।
कार्यदलका साथीहरूलाई १० बुँदा भित्र एमालेको सम्पूर्ण जीवन अटाएको भन्ने लागेको छ। त्यहाँभित्र न्याय छ, समानता छ। त्यहाँ सबैको राजनीतिक अस्तित्व र हैसियत छ भन्ने वहाँहरुलाई लागेको छ। तर दु:खको कुरा अरू केन्द्रीय सदस्य कसैलाई पनि त्यस्तो लागेको छैन, खतिवडाले भने।
कार्यदलका सदस्यहरूले आगामी २४ गतेसम्म केही प्रगति हुने बताएकाले आफूहरूले त्यसलाई पर्खने पनि उनले जानकारी दिए। हामीले २४ गते सम्मको डेडलाइन दिएका होइनौँ। २४ गते केपी ओलीले आफ्नो बैठक बोलाउनुभएको छ। वार्ता दलका साथीहरूले निश्चय केही नै प्रगति हुन्छ भन्नुभएको छ। त्यति बेलासम्म हेरौँ भन्ने कुरा उठेको हो।
खतिवडाले अहिले आफूहरूको जोड अहिले सरकारभन्दा पार्टीको एकतामा नै रहेको पनि बताए। केपी ओलीको स्वेच्छाचारी अडानलाई सरकारमा झारेर अन्त्य गरेका छौँ। अब दक्षिणपन्थी विसर्जनवादलाई पार्टीभित्र अन्तर पार्टी सङ्घर्ष गर्नुपर्छ। हामीले यसका लागि खुट्टा टेक्ने ठाउँ पायौँ, समानताको आधारमा पार्टीमा गयौँ भने हामी ओलीलाई नियन्त्रण गर्न र पार्टीलाई असल कम्युनिस्ट पार्टी बनाउन सक्छौँ भन्नेछ, उनले भने, ‘तर टेक्ने ठाउँ नदिइ हामीलाई तल पारेर ल्याउने ओलीको इरादा प्रति हामी सतर्क छौँ।
यता, नेता सोमप्रसाद​ पाण्डेले आफ्नो समूहले नयाँ पार्टी खोल्ने सम्भावना नरहेको बताएका छन्। पार्टी विभाजनको तयारी पनि छैन, र नयाँ पार्टी खोल्ने अवस्था पनि छैन। हामीले एकताकै पक्षमा छलफल गरेका छौ’ केन्द्रीय समिति बैठकपछि नेता पाण्डेले भने, ‘अहिले पार्टीमा दुईवटा ग्रुप भएको सत्य हो, दुरी पनि धेरै टाढा पुगेको हो तर पार्टी खोल्ने र नयाँ दर्ता गर्ने अवस्था छैन। उनले बैठकमा सरकारमा जाने नजानेबारे प्रश्नहरू उठे पनि तत्काल आफ्नो समूह सरकारमा जान कानुनी समस्या रहेको बताए।
यो पनि : माधव पक्षको स्थायी समिति बैठक सकियो, नेतृत्वले जवाफ दिने
नेकपा एमाले माधव नेपाल पक्षको स्थायी समिति बैठक सकिएको छ। काठमाडौँको बुद्धनगरमा बसेको बैठक केहीबेर अघि सकिएको हो। बैठकमा केन्द्रीय सदस्यहरुले उठाएका विषयमा छलफल भएको थियो ।बैठकमा फेरि बस्ने केन्द्रीय समिति बैठकमा केन्द्रीय सदस्यहरुले उठाएका विषयमा नेतृत्वले समष्टीगत रुपमा जवाफ दिने बारे छलफल भएको थियो।
स्थायी समिति बैठक सकिनुअघि सो समूहको केन्द्रीय समिति बैठक बसेको थियो। बिहीबारदेखि सुरु भएको केन्द्रीय समिति बैठकमा पहिलो दिन २३ र दोस्रो दिन ३२ जना गरी जम्मा ५५ जनाले पार्टी एकताबारे धारणा राखेपछि केन्द्रीय सदस्यहरूले बोल्ने क्रम सकिएको छ।